Waxbarashada Madaniga Ee Dastuurka Iyo Kaalinta Ay Ka Qaadan Karto Fahamka Bulshada Ee Dastuurka Dalka – Kalfadhi
October 5, 2018 October 5, 2018 Kalfadhi
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dadaal waqti badan qaatay ku bixineysa sidii loogu guuleysan lahaa dhameystirka Dastuurka KMG ah ee ah dalka, taas oo keentay in la dhiso guddiyo baarlamaani ah iyo kuwa madax banaan ah oo wasaaradda dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya kala shaqeyna sidii loogu guuleysan lahaa dhammeystirka dastuurka qabyada ah ee dalka.
12 sanno oo u qabyo ahaa dastuurka dalka, dowladda ayaa haatan ku dadaaleysa sidii loo dhameystiri lahaa Dastuurka dalka, ka hor doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalka ka dhacaan marka la gaaro sanadka 2020-ka. Wasaaradda dastuurka iyo guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka ayaana horay u sheegay in Dastuurku uu qabyada ka bixi doono bartamaha 2019-ka.
Xaruumaha Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa sidoo kale lagu qabtay Tababarka Tababarayaasha Waxabrashada Madaniga ah ee Dastuurka dalka, kaas oo Wasaaraddu ay sheegtey in ay ku guuleysatay qabashadiisa.
Magaalooyinka Garoowe, Muqdisho, Baydhabo, Cadaado iyo Jowhar ayaa lagu qabtay tababarradan Bulshada lagu fahamsiinayo dastuurka iyo sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhammeystirkiisa.
TABABARKA QEYBTA CADAADO
TABABARKA QEYBTA JOWHAR
Wasiirka Dastuurka ee Maamulka Hishabeelle Maxamed Cabdiraxmaan oo aan weydiiyey ahmiyadda tabarkan uu u lee yahay bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa sheegay in ujeedka Tababarkaba ay tahay sidii dhammaan bulshada loo gaarsiin lahaa aftida dastuurka dalka.
“ Runtii kii lagu qabtay magaalada Jowhar dad badan ayaa ka faa’iideystey, waxaana ka qeybgalayaasha lagu baraarujiyey in ay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale waxa ay iyagu barteen si la iskula fahmo nuuca dastuur ee dalku qaadanayo.” Ayuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan oo ah Wasiirka Dastuurka ee Hirshabeelle.
“ Tababarka lagu qabtay magaalada Jowhar afar maalmood ayuu ahaa, labada maalmood ee hore waxaa ka qeygalay xubno ka socda bulshada rayidka, labada maalmood ee kalana waxa ka qeybgalay xubno siyaasiyiin iyo aqoonyahanno isugu jira, taas oo muujineysa in dadaal lagu bixinayo sidii loo baahin lahaa aftida dastuurka. ” Ayuu hadalkiisa kusii daray Wasiirka Dastuurka ee Hirshabeelle.
Wasiirka Dastuurka ee Maamulka Hishabeelle
Ka hor tababarradaan waxa jiray tiro aqoon yahanno ah oo loo tababaray sidii ay waxabrashada madaniga ah tababarro la xiriira ay uga fulin lahayeen xaruumaha maamul gobolleedyada, kuwaas oo iyagan loo diyaarinayo sidii ay bulshada u isii gaar siin lahaayeen waxa la baray.
Eng Maxamed Cabdullahi dhaga-cadde ayaa kamid ah dadka loo tababaray qaabkan, waxa uu sharraxay doorka arrintan ay ka qaadan karto in bulshadu ay fahamto dastuurkooda, waxa u tababarro ka bixiyey magaalada Cadaado oo kamid ah xarumaha lagu qabtay tababarkan.
“ Dowlad gobolleedyada ayaa loo tababaray dad ka socda wasaaradaha Dastuurka iyo qeybaha bulshada, kuwaas ayaana ah kuwa bixinaya casharrada tabbarrada Waxabrashada Madaniga ah ee lagu qabtay deegaannada dowlad goboleedyada dalka”. Ayuu yiri Eng dhaga-cadde.
Waxa uu intaa ku daray “ Wasaaradda Dastuurka oo Barnaamijkan dadaalkiisa wadda waxay horay ugu guuleysatay in tabarrada nuucaan ah laga daah furo inta badan xarumaha maamul gobolleedyada iyo Muqdisho, runtii waa arrin horseedi karta lagu guuleysto dhammeystirka dastuurka dalka oo 12-sanno qabyo ahaa oo mashruucba iska noqday.”
Khaliif Axmed Gaabow waa qoon yahan ka faalooda Siyaasadda iyo maamul wanaagga waxa uu aaminsan yahay in bulshada oo la baro dastuurkooda ay soo dadajin karto in lagu guuleysto nuuca dastuur ee la qaadanayo iyo dhammeystirkiisa.
Hadii aad eegto dowladaha horumaray bulshadoodu waxay aad u fahamsan yihiin dastuurkooda iyo xeerarka kale ee dalka u yaala taasina waxa ay ku timid sida ay hay’adaha ka shaqeeya arrimahaasi uga qeyb galiyeen marka hore bulshada, marka anigu arin aad u fiican baan u arkaa wax weyn ayeyna soo kordhin kartaa waxbarashada madaniga ah iyo wacyi galinta dadweynaha ee la xiriirata dastuurka KMG ah ee dalka. Ayuu yiri.
Sakariye Maxamed Axmed oo ah agaasimaha guud ee Wasaaradda Dastuurka ee Maamulka Galmudug ayaa rumeysan in ka galmudug ahaan ay door fiican ka ciyaari karaan gaarsiinta bulshada ee aftida dastuurka dalka, waxa uu tusaale usoo qaatay Tababar afar maalmood socday oo dabayaqadii bishii Agoosto lagu qabtay Cadaado kaas oo bulshada rayidka iyo siyaasiyiintuba ay ka qeybgaleen.
“Runtii tababarkan waxa uu horseedayaa in bulshada reer galmudug ay codkooda iyo aragtidoodaba ay ku biiriyaan dastuurka dalka, si ay u dareemaan in iyagu ay lee yihiin dastuurkan oo uusan u noqon wax looga sheekeeyo oo kaliya”. Ayuu hadalkiisa ku daray.
Guddiga Madaxa-bannaan ee Dib u eegidda iyo Hirgalinta Dasuurka ayaa 2-dii Bishii July 2018 waxa uu si rasmi ah ugu daah-furay wajiga labaad ee dib u eegidda iyo turxaan-bixinta qodobbadda Dastuurka KMG ah ee dalka, kaddib markii qorshaha wajiga labaad lagu ansixiyey shirweynihii qaran ee dib u eegis dastuurka dalka.
Fatxi Maxamed Axmed
Xildhibaan C/Fitaax Qaasim: Dhismaha Guddiga Musuqmaasuqa Waxaa Ku Dhaggan Aqalka Sare
Hoggaamiyaha musharraxiinta mucaaradka oo beeniyay in musharraxiintu isu tanaasuleen
August 4, 2021 Hassan Istiila
Hoggaamiyaha Midowga Musharraxiinta Mucaaradka, ahna musharrax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, ayaa beeniyay wararka sheegaya in musharraxiinta...
Hay’adda Somali Public Agenda oo soo saartay daraasad ka hadleysa hannaanka federaaleynta maaliyadda Soomaaliya
August 2, 2021 August 2, 2021 Hassan Istiila
Hay’adda Somali Public Agenda ayaa dhammaadka todobaadkii hore soo saartay daraasad socotay muddo sanad ah oo...
Madaxweynaha Puntland oo maanta shaacinaya liiska musharraxiinta xildhibaannada Aqalka Sare
Ra’iisul Wasaare Rooble oo sheegay in laga noqday doorashii labada guddoomiye ee guddiga doorashada gobollada-waqooyi
Guddiga baarlamaanka Galmudug u qaabilsan doorashada Aqalka Sare oo doortay guddoomiye iyo ku-xigeen
Guddoomiyaha Golaha Shacab oo kulan la qaatay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka